Moments Neshamwari 49
Ndapota ipai tsananguro yekusafa uye utaure muchidimbu kuti kusafa kunogona kuwanika sei?
Kufa kusafa ndiyo mamiriro umo munhu anoziva nezvekwaari kuburikidza neese matunhu, mamiriro uye shanduko.
Kufa hakufanirwe kuwanikwa nehungwaru, nekushandiswa kwenjere. Kufa hakugone kuwanikwa nekutenda kusingaone mune imwe mhando yekuvapo kusingaperi mushure mekufa, uye hapana munhu anogona kupinda mune kusafa nechipo, kudiwa, nhaka. Kufa hakufanirwe kuwanikwa nekushanda nesimba, nehungwaru.
Kufa hakufanirwe kuve kwakawanikwa uye kuwanikwe kusati kwambofa, mukati mehupenyu hwomunhu mumuviri wenyama mune ino yepanyama. Mushure mekufa kusafa hakugonekwe. Pfungwa dzese dzakadzikwa dziri kuedza kuva dzisingafi. Kana kusafa kusingawanikwe usati wafa, muviri unofa uye pfungwa dzinodzokera kupasi mumuviri mutsva, nguva mushure menguva uye kusvikira kusafa kwawanikwa.
Nzira yekusafa ndeyekuti munhu arege kuzvizivisa iye nemuviri wake wenyama, kana nezvishuvo zvake uye manzwiro ake, hunhu hwake. Anofanira kuzvizivisa kune izvo zvine hunhu hwekuziva; ndiko kuti, naiyewo. Paanofunga izvi uye azvizivise pamwe nazvo, kusafa kunoratidzika kunge kuri pedyo. Kuti ubudirire mune izvi, munhu anofanira kutora hesenzi yezvikamu uye zvinhu zvinogadzira izvo zvaakazvizivisa nazvo. Pashure peiyi hesera anofanira kuongorora kuti chii chinoshanduka maari, uye ndechipi chisingaperi. With with with him with him with; with;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; zvimwe zvese ndezvenguva pfupi.
Izvo zvichawanikwa kuti mari, nyika, zvimiro zvechinyakare, zvinhu, chinzvimbo, mukurumbira uye chero chimwe chinhu cherudzi urwu zvinokosheswa nenyika zvakanyanya, zviri pakati pezvinhu zvinopfuura, uye zvidiki kana zvisina kukosha kumunhu anoedza kusafa. Izvo zvinhu zvakakosha hazvigoneke, kwete zvekunzwa.
Rudyi vavariro uye rudyi mifungo muhupenyu hwezuva nezuva, mune zvese zvikamu zvehupenyu hwezuva nezuva, zvisinei kuti kufamba kwehupenyu kungave chii, ndizvo zvinhu zvinoverengeka. Hausi hupenyu hwakareruka uhwo hunounza mhinduro dzinokurumidza. Hupenyu hwepamhepo, kure nehanya nemiedzo, haupi nzira kana mamiriro. Mumwe munhu ane matambudziko, miedzo, miedzo, asi anozvikunda uye anoramba ari mukutonga kwavo uye achizadzisa chinangwa chake chehungwaru chekusafa, achakurumidza uye muhupenyu vashoma asvike chinangwa chake.
Chimiro chendangariro icho chinoshanda pakutanga ndechekuti mutsvaki azvizive iye oga akapatsanurwa kubva mumuviri wake, akaparadzaniswa neunhu hwake, zvishuvo zvake, manzwiro, manzwiro, uye nemafaro avo nekutambura. Anofanira kuziva iye amene akapatsanurwa uye akazvimiririra pane izvi zvese, kunyange zvichiita sekunge anobata iye pachake uye pane dzimwe nguva zvinoita kunge iye amene. Mafungiro ake anofanirwa kunge ari, ekuti iye ndewekusingaperi, achirarama kunge asinga peri, mukusingaperi, asina miganhu uye kupatsanurana kwenguva, kana kufunga nezve nzvimbo. Ndiwo mamiriro ekusafa. Anofanira kujaira kutarisa izvi sechokwadi. Ipapo anogona kuziva.Kuti fenzi haina kukwana, uye kuzvinyudza nezvazvo, hazvina basa uye mwana.
Ko kuda uye kusafarira kwevanhu kunoratidza mweya wake here? Kana zvirizvo, zvinoratidzwa sei? Kana zvisiri, ko izvi zvinobva kupi uku kusada uye kusada
Izwi rekuti "mweya wemunhu" rinoshandiswa zvine hukasha uye rinomirira zvikamu zvakawanda zvezvinhu zvisingaonekwi izvo pane izvo zvinowoneka zvinonzi murume. Mweya ungareve chimiro chake chepamberi, kana chimumvuri chisati chafa mushure mekufa, kana nheyo isingasviki iri mukati make muhupenyu. Mweya wemunhu pano unotariswa sechipfungwa - zano rekufunga, iro rinoziva mwenje mumuviri. Zvemunhu uye zvaasina kufarira hazviratidzi pfungwa dzake. Kuda uye kusada nezvisarudzo zvinobva muchiito chendangariro nechido.
Kana iyo pfungwa ikafunga zvimwe zvezvishuvo izvo zvinovada; zvimwe zvinoshuvirwa nepfungwa. Ndiwo maitiro epfungwa anofunga zvekuda, chishuwo chinoda; Ndihwo hunhu hwepfungwa hunofunga kure nezvido nemanzwiro, chishuwo hachifarire. Nenzira iyi panokudziridzwa kufarirwa uye kusada pakati pepfungwa nechishuvo. Izvo zvinofarira uye zvisingafarire zvinobva pakufanana uye kusafanana kwepfungwa uye chishuwo. Mwana wemunhu wekuda uye kusafarira anozvarwa uye akaberekerwa mukati make. Ipapo anoratidza zvaanoda uye zvaasingafarire nezvake. Vanofarira uye vasingafarire zvakagadzirwa mumurume mumwe chete zvichagadzira zvimwe zvinonyanya kufarira uye zvisingafarire mumurume waanosangana naye; uye izvo zvinokonzera zvimwe zvimwe kuda uye kusazvifarira mune vamwe varume avo nenzira yakafanana vanoparadzira zvavaida uye zvavasina kufarira; zvekuti nyika izere nekuda nezvisingafarire. Nenzira iyi zvinogona kutaurwa kuti nyika kuratidzwa kweanofarira uye kusada kwemunhu.
Tinoda nyika nezvinhu zviri munyika? Kana kuti hativadi? Hazvina basa kuedza kumira kana kufarira. Zvakanaka kuti munhu arambe kuranga nepfungwa dzake izvo zvaanoziva kuti hazvina kunaka. Saka anonyoresa kusada kwakakodzera. Zvakanaka kwazvo kuti munhu afarire uye afunge nezve izvo zvaanoziva kuti ndizvo, uye azviite. Nenzira iyi ake anoda ane kukosha uye simba. Kana achibata vanoda uye asingafarire nenzira iyi naye, vamwe vanozozviita, zvakare, uye nyika ichachinja neanofarira nezvisingafarire.